Loabary an-dasy :: Hifanankalozana hevitra eny Ankatso ny tontolon’ny fandikan-teny • AoRaha
Loabary an-dasy Hifanankalozana hevitra eny Ankatso ny tontolon’ny fandikan-teny
Manomana famelabelarana miompana amin’ny fandikan-teny, eny Ankatso, ny komity momba ny fahaizana amam-pahalalana eo anivon’ny Oniversiten’Antananarivo amin’ny 17-18 septambra 2019. Hetsika tafiditra ao anatin’ny fanamarihana ny fahenimpolo taonan’ny Sampam-pianarana momba ny soratra sy ny fahalalana momba ny olombelona.
Hifantoka amina lohahevitra roa lehibe ny fihaonana dia: “Ny fandikan-teny anatin’ny taonan’ny nomerika” sy ny “Fandikan-teny vahiny amin’ny teny malagasy”. Maro ny mpampianatra hifandimby haneho hevitra amin’ity loabary an-dasy ity.
Nasaina manokana kosa ny dokotera Ranjivason Jean Théodore (manam-pahazaina momba ny dikan-teny) sy ny profesora Ramarosoa Liliane (mpandrindra ny sanganasan-dRabearivelo) ary ny profesora Pedro Mogorron Huerta (avy any Espaina).
Marolafy ny zana-dohahevitra hifanakalozana sy hifampizarana amin’ireto mpampianatra ireto mandritra ny famelabelarana. Anisan’ny horesahin’izy ireo ao, ohatra, ny hainteny merina sy ny dikan-teny; ny olan’ny fandikana ny fitenim-paritra mandrafitra ny teny malagasy ho amin’ny teny frantsay; ny dikan-teny herin’ny serasera ho an’ny fampandrosoana… Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana ihany koa ny fandraisana anjaran’ireo mpampianatra teny vahiny (anglisy, frantsay, espaniôla..)
Tsy afa-miala amin’ny fandikan-teny ny firenena tsirairay, indrindra ny Nosy toa an’i Madagasikara, noho ny fisian’ny fifanakalozana sy ny serasera. Anisan’ny kendrena amin’izao fihaonana izao ny mpianatra sy ireo rehetra mampiasa sy mikirakira ny tontolon’ny fandikan-teny, araka ny fanazavana avy amin’ny komity mpikarakara ny hetsika.
Fifidianana ben’ny tanana sy mpanolotsaina Amin’ny 26 septambra no hamoaka ny lisitra ôfisialin’ireo kandidà ny Ceni
Zotra nasionaly sy rezionaly :: Hametrahana fitaovana fanarahan-dia na GPS ihany koa ny taksiborosy